Goatemalà: Voafidy Ho Sarimihetsika Amerikana Atsimo Tsara Indrindra Ny “Gasolina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2017 3:33 GMT
(Marihina fa tamin'ny 1 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Matetika lohalaharana amin'ny sokajy toy ny: kolikoly, fahantrana, tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra, herisetra atao amin'ny vehivavy i Goatemalà. Izany no mahatonga ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogera sy ny mpanakanto faly rehefa tonga ihany ny vaovao tsara. Nahazo ny lokan'ny Sarimihetsika Amerikana Latina Tsara Indrindra izahay tao amin'ny Fetiben'ny San Sebastian tany Espaina. Raha ny marina, tsy izahay no nandresy fa ilay tanora mpamokatra sarimihetsika ao Goatemalà, Julio Hernandez, tamin'ilay sarimihetsika notontosainy mitondra ny lohateny hoe “Gasolina“.
Tena faly be ireo latsaky ny 35 taona! Tsiky sy fankasitrahana avy amin'ny rehetra!
Fa ny tena nahaliana kokoa dia ny horonantsary nahazo loka vao haingana izay tsy mamaritra an'i Guatemala ho paradisa, toerana iray tonga lafatra sy mahafinaritra, fa nisafidy ny hampiseho ny zava-misy marina. Ity no horonantsary faharoa nahazo loka tamin'ity taona ity. Ilay bilaogera Jacri, fianakavian'ny iray amin'ny ekipa mpilalao sarimihetsika no voalohany nanambara fa nahazo loka tao San Sebastian ny sarimihetsika:
Amin'ny 8 ora maraina tao Goatemalà, ary nisy olona niantso ahy raha mbola natory aho. Nandray ilay antso ny reniko, ary henoko fa nanomboka nihiaka hafaliana izy satria vao nandresy tamin'ny loka Latin Horizons ny anadahiny sy ny ekipany.
Niarahaba an'i Julio avy any amin'ny firenena lavitra nisy azy i Charakotel , bilaogera avy any ambanivohitr'i Goatemalà izay monina any Danemark ary namintina fohifohy ny fizotran'ny tantara :
Tena niavaka ny fahombiazana, efa niavaka sahady ny famokarana horonantsary tao Goatemalà, noho ny fandraràna na ny tsy fisian'ny fanohanana ara-panjakana amin'ny famoronana zavakanto, noho ny sakana ara-bola, ireo “foza” malaza (ireo izay misakana anao tsy handroso), sns …Mendrika avo roa heny ity loka ity.
Avy any Brezila, ilay poety Goatemaltekà iray nipetraka tao San Pablo nandritra ny taona iray no faharoa nanambara ny vaovao, ary nanokana sehatra iray tao amin'ny bilaoginy, izay nomeny lohateny hoe: Finoana Kely : Faravodilanitra Amerikana Latina.
Hanome ako ny sarimihetsik'i Julio ity loka tena mendrika ity ary hampiseho amin'ny maso sy sofina maro ny sary sy feo avy ao Goatemalà sahiran-tsaina taorian'ny ady an-trano, sy ireo fahatanorany very sy mpandoro. Hanao fanentanana aho manomboka androany mba ho halefa any Brezila ilay horonantsary, ary mino tokoa aho fa hankafy ity tantara miavaka ity sy ny fomba mahafinaritra nitantaran'i Julio izany ny mpijery.
Noho ny ezaka nataon'ireo vondrona tanora Goatemalteka (tanora avokoa ireo mpilalao rehetra) sy ilay mpanatontosa tena mahay, dia hizara ny tanànanay, ny tantaranay, ary ny zava-misy iainanay amin'ny maro hafa eto amin'izao tontolo izao IZAHAY. Tsy tonga lafatra ny firenena, saingy toerana iray izay mbola misy faritra kely ahafahana manatanteraka ny nofinofy izany. Manantena aho fa afaka mahita an'i Gasolina ianareo any an-tanàndehibenareo! Habemus Guatemalan Cinema!